Dhawunorodha Youtube Vhidhiyo neClipgrab | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura Microsoft yakaburitsa inogadziridza yebrowser yayo nyowani inosanganisira yakasarudzika sarudzo yekurodha YouTube mavhidhiyo. Sarudzo inonakidza asi iyo Ubuntu uye Gnu / Linux vave nazvo kwenguva yakareba. Kune akawanda zvirongwa uye plugins kuti uzviite, asi kana iwe uine Ubuntu, Clipgrab ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo. Chii chimwe Clipgrab haina kudya zviwanikwa zvebrowser sezvo tichigona kurodha vhidhiyo tisina kuvhura bhurawuza.
Clipgrab ndeye yakasununguka sarudzo izvo zvinoshamisa hazvigone chete kuiswa paGnu / Linux asiwo ine vhezheni yeWindows. Zvakadaro, sarudzo yakanakisa, senguva dzose, ndeye kushandisa Gnu / Linux.
1 ClipGrab Kuisirwa
2 ClipGrab inobata
Kana isu tiine Ubuntu, kuiswa kwacho kunogona kuitwa kuburikidza nemirairo, isu tinovhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Kana paine kumwe kugovera, isu tinofanirwa kuenda ku iyo yepamutemo webhusaiti Kuti utore turu package, kana tangodhaunirodha isu tinovhura terminal mune iyo folda iyo yakagadzirwa uye nekuita inotevera mirairo:
Izvi zvinogadzira "clipgrab" faira iyo inomhanya nekutaipa ./clipgrab
Nezve izvi tichava nekuiswa kweClipGrab chirongwa.
Kana tangovhura chirongwa ichi, tichaona hwindo rine mana tabo. Mu "tsvaga»Tinogona kutsvaga mavhidhiyo atinoda kudhawunirodha tisingaende kubhurawuza. Kana tangosarudzwa, tinoenda kurodha sarudzo uye ndizvozvo. MuTownloads tab, maitiro acho anokurumidza, isu tinongofanirwa kuisa url yevhidhiyo uye sarudzo dzekurodha, nekuti Clipgrab inotibvumidza kurodha pasi vhidhiyo kana kungo dhawunirodha mp3 odhiyo faira. Zvatinoda.
Sarudzo yeClipgrab inonakidza kwazvo nekuti hatifanirwe kuenda kune yekuwedzera browser, kunyanya zvinonakidza zvikwata zvine zviwanikwa zvishoma zvisingakwanise kushandisa Google Chrome.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Dhawunorodha Youtube Vhidhiyo neClipgrab
Mune manjaro ingangove sudo pacman -S clipgrab
Ini pachezvangu ndinokurudzira youtube-dl. Kana chirongwa changoiswa, isu tinomhanya muYouTube-dl terminal "url yevhidhiyo" uye kana ichienderana, inozotorwa pasi ku / kumba folda. Nemurume youtube-dl tichava nemasarudzo akasiyana. Asi imwezve imwe nzira inoongwa nekuda kwevavengi veiyo terminal.
Pindura kuna Slix
Ndakaiyedza uye chokwadi ndechekuti iri gumi!
andres ku akadaro
kugona chose . imwe chirongwa chiri nyore chakakodzera nguva yako
Pindura kuna andres a
Maria Luisa Sánchez García akadaro
Pindura María Luisa Sánchez García
Lubuntu 16, isiri kundishandira.
Pindura ku kmtlw19
Ini ndinoda chishandiso ichi
Ndakaiisa paConnect Equality Netbook yangu naLubuntu 18.04 nekuti ini ndaingova pamba peumwe wandaishanda naye ndichidzidza uye ini ndaida nekukurumidza chimwe chinhu chekutora mavhidhiyo kubva kuYou Tube kuti ndimupfuure vhidhiyo yekuisa mukuratidzwa kwechidzidzo chatinofanira ipa uyu Mugovera muvashandi vekudzidzisa. Ndakavhura netbook, ndakabatana neWi-Fi, ndakagogodza uye ichi ndicho chinhu chekutanga chandakawana, uye pakubata kwandakaita, chakaponesa hupenyu hwangu, ndichitenda kuti Mahara Software aripo!
Iine Mint 19.3 chirongwa chinovhara mushure memasekonzi mashoma